Meitu MP1710 wuxuu maraa TENAA waana kuwan astaamaha ugu muhiimsan | Androidsis
Meitu, oo ah shirkad Shiine ah oo la aasaasay 2008, waxay umuuqataa inay horeba u diyaarisay terminal cusub sababtuna waa waqtigeedii ugu dambeeyay ee TENAA, jaangooyaha Shiinaha iyo caddeynta. Midkaani wuxuu dhowr saacadood ka hor hoos maray koodhka tusaalaha 'MP1710'.
Meitu MP1710 badiyaa waxay leedahay naqshad la mid ah taleefoonnada kale ee soo -saaraha, sidaas ayaa lagu ilaalinayaa xariiqda iyo qaabka astaamaha astaanta oo aad uga duwan shirkadaha kale ee muxaafidka ah.
Sida laga soo xigtay TENAA, shaashaddiisu waa 5.88-inch guddi OLED oo dadab ah oo leh qaraar sare oo ah 2.244 x 1.080 pixels taasi waxay ina siinaysaa cidhiidhi iyo raaxo 19: 9 saamiga dhinac. Dusha sare ee shaashadda waxaa ku yaal laba dareemayaal kaamiro oo waaweyn oo aan u adeegsan doonno is -sawiridda iyo wicitaannada fiidiyaha. Gudaha, caddaynta ayaa tilmaamaysa taas waxaa jira processor octa-core oo ah 2.2GHz xawaaraha inta jeer ee ugu badan. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku timaadaa 4GB iyo 6GB RAM kala duwanaansho leh 64GB iyo 128GB oo ah meel kaydinta gudaha ah siday u kala horreeyaan.
Taleefanku wuxuu leeyahay laba kamaradood oo gadaal ah waxayna leeyihiin isla 12MP + 5MP xallinta xallinta kuwa hore.. Waxay u badan tahay inay la yimaadaan muuqaalka qurxinta wajiga ee Meitu. Waxa kale oo uu leeyahay akhristaha farta oo ku yaal dhabarka hoostiisa nidaamka sawirka iyo wuxuu ku shaqeeyaa Android 8.1 Oreo oo ah nidaamka hawlgalka. Awoodda baytarigu waa 2.830mAh, waxayna leedahay taageero si dhaqso ah loogu dallaco.
Meitu MP1710 ayaa cabirkeedu yahay 164.1 x 71.6 x 9.5 milimitir culeyskiisuna yahay 175 garaam. Markay bilaabanto, waxay ku imaan doontaa caddaan iyo guduud. Dhabarka ayaa leh muuqaal luul ah oo leh bir bir casaan leh. Waxaa sidoo kale jira lahjaddo casaan ah oo ku wareegsan dejinta kamaradda dambe iyo iskaanka sawirka faraha oo si hoose indhahayaga ugu farxiya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Meitu MP1710 wuxuu maraa TENAA oo kuwani waa astaamaheeda muhiimka ah
Ka soo gal saadaasha hawada barta bareegaha ee mobilkaaga Android iyadoo la socota Navbar Weather